Ny tranom-bakoka Getty dia manohitra anao hamerina asa vita amin'ny hosodoko amin'ny zavatra 3 | Famoronana an-tserasera
Famoronana kely ary a fanamby mahaliana sy mahaliana toa ilay tao amin'ny tranombakoka J. Paul Getty avy any Los Angeles ary efa manana zavatra mahafinaritra ankafizinay mianakavy amin'izao andro fitanana izao. Io no tolo-kevitr'ity mozea ity ihany ho an'izao tontolo izao.
Ary ny marina dia ny sasany amin'ireo tolo-kevitra notanterahin'ireo mpandray anjara Izy ireo dia mendrika aseho amin'ity lahatsoratra ity amin'ny olon-drehetra ary noho izany dia mamporisika anao hanao toy izany koa. Fotoana mahafinaritra hialana amin'izany fahazarana napetraky ny COVID-19 tamin'ny planeta iray manontolo.
Ny Getty Museum Challenge dia manosika anao hiezaka hamerina a sary hosodoko mpanao hosodoko malaza sasany misy zavatra 3 izay azonao atao amin'ny fanananao. Izany hoe, tsy maintsy mamantatra izany ianao tahaka ny nataon'ny mpandray anjara rehetra. Fanamby amin'ny faharanitan-tsaina, fahaiza-mamorona ary talenta araka ny hita amin'ireo sary ireo.
Tsy vitsy ny tranombakoka izay mihantsy ny olona maro manerantany toy ny Pinchuk Painting Center any Kyiv any Ukraine, ary ity iray teo aloha ity dia notsindrian'ny fanambin'ny Kaonty Instagram anelanelan'ny Art sy Quarantine; Raha ny marina dia efa hitantsika teto amin'ny firenentsika ny fisehoan'ny voafonja sasany amin'ny fahitalavitra amin'io zavatra io ihany.
Ny tena marina dia ny santionan'ny mpandray anjara no tena marani-tsaina indrindra ary ny sasany manana fahaiza-mamorona ampy hametrahana mpikambana marobe amin'ny fisamborana iray ihany. ny Mona Lisa na "Isolation" an'i Dalí Izy ireo no tsara indrindra hitantsika.
Raha mieritreritra ianao fa mbola tara amin'ny fanamby, dia aza kivy, satria misy fotoana hifalifaliana miaraka amin'ny fianakaviana mba hahita ireo zavatra telo izay azon'izy ireo alaina tahaka ny sary hosodoko sasany. Raha, Niverina ny Viper, Miverina matanjaka kokoa ny Hopper ary manana fanovana aza izahay Aiza i Wally avy amin'ny coronavirus.
Fampahalalana bebe kokoa amin'ny Getty.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny tranombakoka J. Paul Getty dia mihaika ny olona any an-trano hamorona sary hosodoko malaza